Finfinneefi qonnaan bultoota: Atakaaroo lafa qonnaan bultoota Finfinneerraa 'saamame' jedhamee - BBC News Afaan Oromoo
Finfinneefi qonnaan bultoota: Atakaaroo lafa qonnaan bultoota Finfinneerraa 'saamame' jedhamee
26 Caamsaa 2020
Madda suuraa, Mayor Office Addis Ababa/Facebook
Lafti heektaara 46 magaalaa Finfinnee naannoo Jamootti Waldaa Aksiyoona Daldala Qindaawaa Finfinnee/FIT/ fi bulchiinsa magaalattii jidduutti falmii kaasee ture qonnaan bultootaaf deebi'uu bulchiinsi magaalattii himeera.
Lafichi qonnaan bultoonni gowoomfamanii kan saamaman ta'uu fi hordoffii tajaajilli odeeffannoo fi tikaa biyyaalessaa poolisii magaalaa Finfinnee waliin ta'uun taasiseen irra gahamuu eeree jira.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakka kantiibaan magaalattii injinar Takkalaa Uumaa jiranitti Wiixata lafa heektaraa 46 kana qonnaan bultootaaf deebisuu hime.
Qonnaan bultoonni lafa kana qonna magaalaatiin akka misoomsan bulchiinsi magaalattii deeggarsa barbaachisu akka taasisus injinar Taakkalaan dubbachuu bulchiinsi magaalattii beeksiseera.
Saamicha lafa kanaan himatamanii booda 'wanti na himachiisu waan hin turreefan gadi dhiifame' kan jedhan walitti qabaan boordii Waldaa Aksiyoona Daldala Qindaawaa Finfinnee/FIT/ fi ogeessi seeraa Obboo Lammii Taayyee garuu wanti "injinar Taakkalaan godhe diraamaadha" jedhan.
'Wanti na himachiisu waan hin turreefan gadhiifame'
Lafa magaala Finfinnee hektaara 46 'seeraan ala qabame' jedhame duuba maaltu jira?
"Laftichi durumaanuu kan qonnaan bultootaa ture, maqaa 'Finfinnee Integrated Trade' jedhuun harkuma qonnaan bultootaa ture" jedhu Obbo Lammiin.
"Lafti nama biraa harka jiraatee, isaan qonnaan bulaaf deebisan hin jiru, oduun darbe sun kijiba," jedhu.
"Hanga manni murtii lafti kan keessan miti jedhee murtii duraan kenne jijjiirutti lafti kanuma keenya ta'ee jira" jechuun ammallee lafichi Waldaa Aksiyoona Daldala Qindaawaa Finfinnee/FIT/ harka jiraachuu himu.
Qonnaan bultoonni maal jedhu?
Obboo Tsaggaayee Diroo idoo jedhame kanaa lafa kaaree kuma 9 ta'u qabu. Waldaan duraan dhorka mana murtii itti baasee waan tureef lafa isaanii akka fedhanitti itti fayyadamaa akka hin turre dubbatu.
Guyyaa kaleessaa bulchiinsi magaalatti laficha waan deebiseefi jiruuf amma booda lafa isaanii itti dhimma bahuu eegaluu dubbatu.
"Kaleessarraa eeggallee kunoo qotachuu jalqabneerra" jedhan.
Lafti isaanii deebi'uufi kan nutti himan qonnaan bulaan biroo Obboo Gullilaat Tashoomaa 'waldaan lafa keenyarraa homaa hin qabu' jedhan.
"Duraan yoo qotte hin hidhamta turte, amma garuu qonnatti galleerra" kan jedhan Obboo Gullilaat "namni kiyya jedhu yoo jiraate haa dhufu" jedhan.
Qonnaan bultoonni lafti deebi'eef walumaagalatti lakkoofsaan 150 akka ta'an hoji gaggeessaan olaanaa kutaa bulchiinsa NIfaas Silk Laaftoo Obboo Fiqaaduu Kaasaahun BBC'tti himaniiru.
Qonnaan bultoonni bara 2009 irraa eegalee lafa isaanii akka itti hin fayyadamne dhorkamanii kan turan ta'uus dubbatu.
Dhorka mana murtii
Lafichi ammayyuu Waldaa Aksiyoona Daldala Qindaawaa Finfinnee/FIT/ harka jira jedhan kan falman walitti qabaan boordii waldichaa Obboo Lammiin, bulchiinsi magaalatti ajaja mana murtii diiguu akka hin dandeenye himu.
Bulchiinsi magaalattii garuu jalqabumaa akki waldaan kun itti ijaarame seeran ala akka ta'ee hima.
Lafichi qabiyyee waldaa sanaa ta'uu kan agarsiisu ragaan seera qabeessa ta'e tokkollee akka hin jirre dubbatu Obbo Fiqaaduun.
"Lafti kun kan waldaa kanaati kan jechisiisu xalayaan tokkitiin hin jirtu" jedhu.
Madda suuraa, Marsaa Hawaasaa
Silaa Waldichi kara seera qabeessa akka aksiyoonaatti ijaaramee beekamtii qabaate, kartaan qabiyyeen sun kan isaa ta'uu agarsiisu jiraachuu mala jedhu.
Waldichi heeyyama daldalaa baafatee kan socho'aa ture lafa kanaan osoo hin ta'iin mana iddoo biraa jiruun akka ta'e himu Obboo Fiqaaduun.
"Lafa kanaan hayyamni kenname tokkollee hin jiru" jedhu.
Ajajni manni murtii amma dura dabarse dallaa waldichi lafa sanirratti ijaarsisee tureen kan wal qabatu kan jedhan Obboo Fiqaaduun manni murtii lafa duwwaa irratti dhorka baasuu hin danda'u jedhan.
Murteen darbe sun dogoggora ta'uu mana murtii waliin dubbannee wal hubachiisneerras jedhu.
Bulchiinsi magaalattii tiraaktara 5 fi paampii bishaanii 20 qonnaan bultootaaf dhiyeessee jiraachuu kan himan Obbo Fiqaaduun, qonnaan bultoonni kuduraa fi muduraalee gara garaa qonna magaalaa ammayyaan oomishanii ofiif maatii isaaniirra darbanii magaalattiif akka dhiyeessan hojii eegaluu BBC'tti himaniiru.
Lammii Taayyee: "Wanti na himachiisu waan hin turreefan gadhiifame"
5 Caamsaa 2020
30 Ebla 2020
Viidiyoo, Magaalaa Finfinneefi carraa qonnaan bulaa naannooshee, Turtii 2,33